Title: Collected Burmese laws of 2006 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Conservation of Water Resources and Rivers Law - SPDC Law No. 08/2006 - ၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး၊ ဥပဒေအမှ�
Title: SPDC Law No. 07/2006 - The Law Amending the Development of Border Areas and National Races Law ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး၊ �
Title: SPDC Law No. 06/2006 - The Law Amending the Leave and Holidays Act, 1951 ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး၊ ဥပဒေအမှ�
Title: SPDC Law No. 05/2006 - The Control of Smoking and Consumption of Tobacco Product Law ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး၊ ဥပေ�
Title: SPDC Law No. 04/2006 - The State Budget Law, 2006 ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး၊ ဥပဒေ(၄)နိုင်ငံဘဏ�
Title: SPDC Law No. 02/2006 - The Law Amending the Income Tax Law ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး၊ ဥပဒေ(၂) ၀င်ငွေ�
Title: SPDC Law No. 03/2006 - The Law Amending the Commercial Tax Law ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး၊ ဥပဒေ(၃) ကုန်သ
Title: SPDC Law No. 01/2006 - The State Supplementary Appropriation Law, 2006 ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး၊ ဥပဒေ(၁) နိ�